समाजवादी र राजपाबीच तत्काल एकीकरण नहुने - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७६ साउन २८ गते ७:०४
काठमाडौं, २८ साउन । समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल)बीच एकीकरण गर्ने भनिए पनि तत्काल नहुने भएको छ । दुई पार्टीका शीर्ष नेताबीच छलफल जारी रहे पनि केही विषयमा कुरा नमिलेपछि तत्काल एकीकरण नहुने देखिएको हो । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
यसैगरी, सरकारमा सहभागी समाजवादीले ‘एकीकरणअघि सरकार छोड्ने कि पश्चात् ?’ भन्नेबारे पनि सहमति हुन नसकेको स्रोतले जनायो । राजपा एकीकरणपश्चात् महन्थ ठाकुर १ नम्बरको नेता हुनुपर्ने, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुनुपर्ने र एकीकरणअघि नै समाजवादीले सरकार छोड्नुपर्ने अडानमा छ ।
यद्यपि, समाजवादी भने महन्थ ठाकुरलाई १ नम्बरको नेता अस्वीकार गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक र एकीकरणपछि सरकार छोड्ने वा नछोड्ने निर्णय एकीकृत पार्टीले गर्ने अडानमा छ ।
स्रोतका अनुसार राजपा अध्यक्षमण्डलमा रहेका ६ नेतामध्ये ठाकुर र महतो तथा समाजवादी अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसहितको चार सदस्यीय अध्यक्षमण्डल बनाउनुपर्नेमा शीर्ष नेताबीच सहमति भएको छ । तर, यी चारै जनाको रोलक्रम विषयमा सहमति जुट्न बाँकी नै रहेको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी’, झन्डा समाजवादीको र चुनाव चिह्न राजपाको राख्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।
यसैगरी, बारबरी संख्यामा दुवै पार्टीबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य राख्ने सहमति बनेको छ । सहमतिअनुसार राजपाको हालका अध्यक्षमण्डलका महतो र ठाकुरबाहेकका चार नेतालाई वरिष्ठ नेता र त्यतिकै संख्यामा समाजवादीबाट पनि वरिष्ठ नेता राखिने भएको छ ।
दुई महिनादेखि एकीकरण विषयमा गम्भीर हु“दै आएको छलफलमा राजपाबाट ठाकुर, महतो, समावादीबाट डा. भट्टराई, यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा आवश्यकताअनुसार अन्य नेता सहभागी हु“दै आएका छन् । अहिले राजपा नेता ठाकुर उपचारका लागि दिल्लीमा छन् । उनी फर्किपछि पुनः छलफल गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ ।
यद्यपि, राजपाका केही नेताले अहिले पार्टी महाधिवेशनमा लागेकाले त्यसपछि नै एकीकरण विषय टुंगो लाग्ने जनाएको छ । एकीकरणका लागि सहमत भएको र छलफल सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
गत २३ वैशाखमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो । वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि समाजवादी र राजपा नेपाल एकीकरण विषयमा सहमत भएका छन् । एकीकरणअघि सिद्धान्त, विचारलगायतका विषयमा छलफल गर्न दुवै पार्टीका शीर्ष नेता जुटेका छन् ।